အရည်အသွေးမြင့်ဆလင်ဒါလက်များလက်ကားလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ | 1D;ONE
ကွမ်ကျိုး, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
1d; ကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကားပိုက်ကွန်ဆလင်ဒါဆလင်ဒါလက်များ - 1d; တ ဦး တည်း, ခိုင်မာတဲ့သုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ
1D; အရည်အသွေးမြင့်ဆလင်ဒါလက်များလက်ကားလက်ကားလက်ကား - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။ အားကောင်းတဲ့သုတေသန& နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း - အင်ဂျင် 1600 ကျော်ကိုပြင်ဆင်ပါ
ဆလင်ဒါနံရံသည်ဆလင်ဒါဆလင်ဒါတွင်း၌နေရာ ချ. ဆလင်ဒါတွင်းရှိအပေါက်များဖြင့်ထားရှိပြီးဆလင်ဒါခေါင်းပေါ်ဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ ပစ္စတင်သည်၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအပေါက်တွင်အပြန်အလှန်ရွေ့လျားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဆလင်ဒါလက်မောင်း၏ function မှာ:
2. ဆလင်ဒါပစ္စတင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဆလင်ဒါလက်ရှိမှုသည်ပစ္စတင်ဘက်တွင်ပစ္စတင်ဘက်သို့0င်ရောက်လာပြီးပစ္စတင်၏အပြန်အလှန်လှုပ်ရှားမှု ဦး ဆောင်မှုဖြစ်လာသည်။
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ Panty Liners 1D Auto Parts CO ။ , LTD ကိုအသုံးပြုသည်။
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းရှိသည်။
2. မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်အဆင်ပြေ& လုံလောက်သောအဆင်သင့်စတော့ရှယ်ယာ
4.fachility& လက်မှတ်များ - တပ်ဆင်ထားသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သော Bosch / Siemens စက်များတပ်ဆင်ထားသည်
ထုတ်ကုန်၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်လက်တွေ့ကျမှုအပါအ0င်အလွန်ကောင်းသည်။
1. အင်ဂျင်မှာ gasket ကဘာလဲ။
အင်ဂျင်ကိုရေနံနိမ့်သည်ဆိုပါက 2.What ဖြစ်သွားမလဲ
2.Japan က NPR နည်းပညာနှင့် 170 သည်လေ့ကျင့်ထားသောပညာရှင်များ, CCIP အပေါ်ယံပိုင်း, ISO / TSL6949-2002, ISO-2014 မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
3,32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနေ့စဉ် output ကိုစွမ်းရည် 40,000 PCs ပစ္စတင်, 200,000 PCs လက်စွပ်ပစ္စတင်
oe NO .: 5-11261-016-2 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: 1D
မူလအစရာ: ကွမ်ကျိုး, တရုတ် (ပြည်မကြီး), အရောင်: အဖြူရောင်
မော်တော်ကားမော်ဒယ်: ဆလင်ဒါအကှနျ့ မော်ဒယ်အရေအတွက်: 4BE1
အမျိုးအစား: စံအရွယ်အစား Size: စံအရွယ်အစား
အာမခံ: 1 နှစ် ပစ္စည်း: metal
MOQ: 1 Cylinder တင်ပို့နေ့စွဲ: 5-7 ရက်အတွင်း
1D ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း CO ။ , LTD မှ, နှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လူကြိုက်များ, Export, လက်ကားအရောင်းဆိုင်, Trader Motors ကထုတ်ကုန်များရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုက ISO 9001 နှင့်အမျှ: 2008 အသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီကျနော်တို့လူတန်းစားထုတ်ကုန်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာကြဖို့အရေးကြီးနေသည်။ အစကတည်းကကျွန်တော်စက်မှုလုပ်ငန်းအတည်ပြုထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အစအဆုံးအကုန်တင်ဆက်ထားပါတယ်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်ကတိကဝတ်ပြနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချဉ်းကပ်ထွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအများကလေးစားဖောက်သည်များအတွက်အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောထုတ်ကုန်ရောက်စေဖို့လှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်တော်မူသောငါတို့၏လူတွေအတွက်ဆန်းသစ်သောစိတ်ကူးများအားပေးထားသည်။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့ရေပန်းစားနည်းပညာနှင့်ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်၏မဟာမိတ်ထောက်ခံမှုများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအစွန်းပေါ်မှာတည်းခိုနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအာရုံစူးစိုက်ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားကြသည်။ ဒီအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အရည်အသွေး, ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြီးမားတဲ့ client ကိုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်ကိုက်ညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား